February 1, 2021 - Pyone Pyone Lay
Pyone Pyone Lay
တပ်မတော်အာဏာသိမ်းခြင်းကို အားပေးသည့်သူများ မြို့တွင်လှည့်လှည် အောင်ပွဲခံ
တပ်မတော်အာဏာသိမ်းခြင်းကို အားပေးသည့်သူများ မြို့တွင်လှည့်လှည် အောင်ပွဲခံ တပ်မတော်အာဏာ သိမ်းခြင်းကို အားပေးသည့် သူများမြို့တွင်လှည့်လှည် အောင်ပွဲခံ တပ်မတော်သည် အာဏာသိမ်းယူမှုကို ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက် မနက်ပိုင်းတွင် မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမ ​ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင် တပ်မတော် အာဏာ သိမ်းခြင်းကို အားပေးသည့် သူများမြို့တွင်းလှည့်လှည်ခြင်း ပြုလုပ် ခဲ့သည်။ တပ်မတော်အာဏာ သိမ်းယူခြင်းကို နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းများ ၊အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့စည်းများနှင့် ပြည်တွင်းရှိ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများမှ ကန့်ကွက့်ရှုတ်ချကြောင်း သဘောထားများ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Photo – Kyaw Zayar Lin / MPAတပ်မတော်အာဏာသိမ်းခြင်းကို အားပေးသည့် သူများမြို့တွင် လှည့်လှည် အောင်ပွဲခံတပ်မတော်သည် အာဏာသိမ်းယူမှုကို ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက် မနက်ပိုင်းတွင် မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှကြေညာပြီး ​နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင် တပ်မတော်အာဏာ …
မြိတ်မြို့တွင် ဆန်ဝယ်ယူသူများ၊ ဆန်ပြတ်လပ်မည်ကို မစိုးရိမ်ရန် ဆန်ကုန်သည်ပြော
မြိတ်မြို့တွင် ဆန်ဝယ်ယူသူများ၊ ဆန်ပြတ်လပ်မည်ကို မစိုးရိမ်ရန် ဆန်ကုန်သည်ပြော တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်မြို့က နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ NLD က တာဝန်ရှိသူတွေကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အထဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီး၊ မြိတ်မြို့နယ်စည်ပင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြိတ်မြို့နယ် ၈၈ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက သူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှား သူစုစုပေါင်း ၈ ဦး ထိန်းသိမ်းခံ ထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီလို အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာပြီးနောက် မှာတော့ မြိတ်မြို့က ရွှေဆိုင်တွေ အကုန်လုံးနီးပါး ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ စားသုံး ကုန်တွေကို အများအပြား ဝယ်ယူ သိုလှောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ …
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအသစ်(၁၁)ဦးခန့်အပ် ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး ဌာန(၁၁)ခုရဲ့ ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးတွေ ကို အသစ်ခန့် အပ်လိုက် တယ်လို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချု ပ်ရုံးက သတင်း ထုတ်ပြန် ပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးအဖြစ် ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် ၊ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးအဖြစ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးအဖြစ် ဒုတိယဗိုလ် ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်၊ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး …
အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် အမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ တရုတ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများ ရှုတ်ချ
အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် အမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ တရုတ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများ ရှုတ်ချ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အခြားနိုင်ငံရေးသမားများကို တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးကာ အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက် အမေရိ ကန် အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ အစိုးရများက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည် သွတ်သွင်းပေးရန် တောင်းဆိုနေသည်။ ‘‘ဒီခြေလှမ်းတွေ နောက်ပြန် မဆုတ်ဘူးဆိုရင် တာဝန်ရှိတဲ့သူ တွေကို ကျွန်မတို့ အရေးယူဆောင် ရွက်မှုတွေ လုပ်မှာပါ’’ဟု အိမ်ဖြူ တော် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုး သမီး ဂျန်ပီဆာကီက ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ပြောသည်။ နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းမှု မှန်သမျှ မိမိတို့ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပီဆာကီက ထပ်လောင်းပြော သည်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီး အန်သိုနီဘလင်ကန်က …
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ သမ္မတနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို နေအိမ်မှာပင်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း NLD သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ပြော
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ သမ္မတနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို နေအိမ်မှာပင်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း NLD သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ပြော နေပြည်တော်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို နေအိမ်တွင် ထိန်းသိမ်း ထား‌ကြောင်း NLD သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးမှ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးကြည်တိုးက ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသား ထားချက် အရ သိရ ပါတယ်။ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်လည်း အိမ်တွင်အထိန်းသိမ်းခံရကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံသည်ဆိုသည့်ဓါတ်ပုံမှာ အဟောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေ၏ နာရေးမှ ဓါတ်ပုံဖြစ် ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လက်ရှိအချိန်တွင် နေအိမ်တွင်း၌ ပင်ရှိနေပြီး မကြာခဏ ခြံတွင်းလမ်း ဆင်းလျှောက်ကြောင်းကြား သိရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များကိုလည်း စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ(၂)အတွင်း၌ပင် ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ် …
ပုသိမ်မြို့ရှိ NLD တိုင်းရုံးကို တပ်မတော်က ချိတ်ပိတ်
ပုသိမ်မြို့ရှိ NLD တိုင်းရုံးကို တပ်မတော်က ချိတ်ပိတ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ ကမ်းနားလမ်းရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ တိုင်းရုံးအား တပ် မတော်က ယနေ့ ချိတ်ပိတ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ယာယီသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ထံ နိုင်ငံတော် အာဏာ လွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက် ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ကမ်းနားလမ်း ငွေဆောင်ကားဂိတ်အနီးရှိ NLD တိုင်းရုံးကို တပ်မတော် ယာဉ်တန်းတခု ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ရုံးအတွင်း ရှာဖွေ သိမ်းဆည်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ရုံးကို ချိတ်ပိတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ NLD ပါတီ ဧရာဝတီတိုင်းရုံး၏ ရုံးအဖွဲ့မှူး …
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကျိုးစီးပွားကို ဦးစားပေးပြီး အာဏာသိမ်းခြင်းဟု ဦးဝင်းထိန်ပြော
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကျိုးစီးပွားကို ဦးစားပေးပြီး အာဏာသိမ်းခြင်းဟု ဦးဝင်းထိန်ပြော “ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး၏ အကျိုးစီးပွားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မရှိဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကျိုးစီးပွားကိုသာ ဦးစားပေးသူ” ဟု ယနေ့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိ ဦးဝင်းထိန်က ဝေဖန်လိုက်သည်။ “တရားဝင် အစိုးရ၊ ပြည်သူလူထုကနေ Mandate ပေးထားတဲ့ ပြည်သူလူထုကနေ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းလိုက်ပြီ ဆိုကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ မထူးဇာတ်ခင်းသွားပြီ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ယနေ့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် သတင်းထောက်များက NLD ပါတီ …
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန် ဂျပန်အစိုးရ တောင်းဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန် ဂျပန်အစိုးရ တောင်းဆို တပ်မတော်က ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ထားတဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ဂျပန်အစိုးရ တိုက်တွန်း လိုက်ပါ တယ်။ ဂျပန် အစိုးရ အဖွဲ့ အတွင်းဝန်ချုပ် ခဆုနိုဘူ ကိုတာက ဒီနေ့ညနေပိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ထည့်သွင်း ​ပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလေးအနက် စိုးရိမ်နေတယ်လို့ အတွင်းဝန်ချုပ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်အစိုးရ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေး ပံ့ပိုးနေမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီး အနာဂတ်မှာ တုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့ ဘယ်လို ဆက်လုပ်မလဲလို့ သတင်းထောက် …
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ဖမ်းဆီးထားသူများ ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် အမေရိကန်တောင်းဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ဖမ်းဆီးထားသူများ ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် အမေရိကန်တောင်းဆို နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းထားသူများ ကို ယနေ့ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးရန် အမေရိကန် သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်က တောင်းဆို လိုက်သည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် / အတိုင်ပင်ခံရုံးနိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ဖမ်းဆီး ထိန်း သိမ်းထား သူများ ကို ယနေ့ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးရန် အမေရိကန် သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်က တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် NLD ပါတီထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များကို တပ်မတော်က ယနေ့မနက် အစောပိုင်းတွင် ဖမ်းဆီး လိုက်ပြီးနောက် အိမ်ဖြူတော်က …
24 ကြိမ်မြောက် ​အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲ
24 ကြိမ်မြောက် ​အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲ ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆု ကဆ ၄၂၅၉၇၂ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆု ဇ ၄၉၆၀၃၅ ကျပ် သိန်း ၅၀၀၀ ဆု ကဇ ၃၂၉၄၆၇ ကစ ၉၈၈၄၂၅ ကျပ် သိန်း ၂၀၀၀ ဆု ဘ ၉၇၅၁၆၃ . အ ၇၈၀၉၆၃ .ဍ ၇၄၁၆၅၅ . က ၈၈၈၁၀၅ ကျပ် သိန်း ၁၀၀၀ ဆု . ကစ ၂၀၈၉၉၅ .ထ ၃၆၅၁၈၃ .ဋ္ဌ ၅၆၄၃၉၆ .ပ ၃၂၀၅၃၉ .ဍ …
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရှောင်တိမ်းနေရတဲ့သူမကို ဟိုမှာတွေ့တယ်ဒီမှာတွေ့တယ်နဲ့စွပ်စွဲနေတဲ့သူတွေကို ထိထိမိမိတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ မြနှင်းရည်လွင်
အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းဖမ်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့ မေတိုးခိုင်အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေလိုက်တဲ့ စံထိပ်ထားဦး
အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းအဖမ်းခံလိုက်ရတာ တစ်လပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မောင်ဖြစ်သူပိုင်တံခွန်ကို လွမ်းဆွတ်နေကြောင်း ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ
ေ​တ်ာလှန်ရေးမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေ ထက်စာရင် သူမခုလို တိမ်းရှောင်နေ ရတာဟာ ဘာမှမပြောပလောက်ပါဘူးလို့ ဆိုလိုက် တဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ